ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Horizontal Lifeline ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ) - rayhab ဖြစ်ပါသည်
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဏ္ဏဝါလမ်း Alsancak-HalkapınarMüsellesသောတောင်ပေါ်-သက်တမ်းတိုး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဓာတ်လှေကား Electro-စက်မှုအလုပ်လုပ်Yaptırılacaktır »
အလျားလိုက် Lifeline Buy ပါလိမ့်မယ်
ဘဝကိုစားသုံးမှုလိုင်းစနစ်ကအများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 398076
ခ) တည်နေရာ: Sivas ၏TÜDEMSAŞအထွေထွေညွှန်ကြားမှု
ဂ) Delivery နေ့စွဲ: တင်သည့်ရက်စွဲအောက်ပါ 60 နေ့ရက်ကာလ၌ လုပ်. တပ်ဆင် running ကိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 24.09.2019 - 14: 00
TÜDEMSAŞ, အလျားလိုက် Lifeline Buy ပါလိမ့်မယ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Horizontal နှင့်ဒေါင်လိုက် Lifeline အလုပ်လုပ် (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ခေါင်မိုးဘောင်များအတွက် OHS အစီအမံအတွက်ကန်ထရိုက်တာစက်ခေါင်းစက်ရုံဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက် Lifeline ထားကြပါတယ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လုပ်ငန်းခွင်ပြုလုပ်ခြင်း Lifeline စနစ် (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကဝယ်ဖို့ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက် dampers (TÜVASAŞ) အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ဟိုက်ဒရောလစ် Shock ကိုစုပ်ယူဒေါင်လိုက်, အလျားလိုက် Transverse Damper Alınacaktır
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: IRR Wagon ယော Damper ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက် Shock ကိုစုပ်ယူအရစ်ကျလုပ်ငန်းခွင် (TÜVASAŞ) အတွက်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဝယ်ယူလျက်ရှိဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်ရထား damping အဘို့မှာ IR Yaw damper (TÜVASAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Horizontal ဒေါင်လိုက် Damper Shock ကိုစုပ်ယူအရစ်ကျယော Damper (TÜVASAŞ) အလုပ်မလုပ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Horizontal နှင့်ဒေါင်လိုက် Transverse Damper Shock ကိုစုပ်ယူအရစ်ကျ (TÜVASAŞ)